Ganacsiga Xamar weyne oo xiran iyo banaan bax looga soo horjeedo Wasaarada Maaliyada oo ka socda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
15th October 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Ganacsiga Suuqa Xamar weyne ayaa maanta xiran, kadib markii Ganacsatada suuqaas ay sameeyeen shaqo joojin ku aadan amar ka soo baxay Wasaarada Maaliyada Soomaaliya.
Qaar ka mid ah Ganacsatada ayaa sameeyay banaan bax ay uga soo hor-jeedaan amar ka soo baxay Wasaarada Maaliyada oo ahaa in dukaan walba oo ganacsi ay bishii bixiso lacag dhan $20 (Labaatan Doollar), waxaana ganacsatada ay ku doodayaan in lacagtaas aanay awoodin, isla markaana laga qaado maalin kasta lacago canshuuro ah.
Mid ka mid ah Ganacsatada oo la hadlay Jowhar.com ayaa sheegay inay markii hore qaati ka taagnaayeen canshuuro wajiyo kala duwan looga qaadayay, haatana ay ugu darsoontay lacag dheeraad ah oo ka baxsan canshuurtii.
“Anaga waxaa sanadkii bixinaa shatiyada ganacsi, maalintii waxaa isii dheer in nin Minishiibiyo ah inuu iga qaado lacag canshuur ah, waxaa hada noo yimaaday niman ka socda wasaarada maaliyada oo na dhahaya bil walba dukaankii waxaa laga rabaa labaatan doolar”ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada suuqa xamar weyne oo diiday magaciisa.
Banaan baxa ay sameynayeen ganacsatada ayaa waxa ay ku qeylinayeen erayo ka dhan ah Wasaarada Maaliyada oo ay ku eedeeyeen inay u jeesatay inay boobto hantida dadka.
Shalay ayay aheyd markii Gudoomiyaha Gobolka Banaadir uu ku eedeeyay Wasaarada Maaliyada inay canshuuro ka qaado dadka xoogooda maasha, gaar ahaan caanaha la keeno magaalada, cooska iyo dhagaxa.
Khilaafka u dhaxeeya Wasaarada Maaliyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa hada gaaray meel aad u sareysa, waxaana arrintan loogu baaqay inuu soo fara geliyo Madaxweynaha Soomaaliya.
Sawirro: Dumarka Kurdiyiinta ee ka dagaalamaya Kobane